"AMINNY ANDRO" – купить книгу ISBN 978-5-0050-9583-1 с быстрой доставкой в интернет-магазине OZON
Код товара: 165406514
Черно-белая книга в цветной мягкой обложке. Ity fanangonana ity dia mitantara ny fiainan’ny tontolon’i Rosia matanjaka sy tsy feno ary manam-pahaizana indrindra. Saingy ny olona tsy manan-kialofana Ro
Черно-белая книга в цветной мягкой обложке. Ity fanangonana ity dia mitantara ny fiainan’ny tontolon’i Rosia matanjaka sy tsy feno ary manam-pahaizana indrindra. Saingy ny olona tsy manan-kialofana Rosiana dia tsy kivy ary mahita fifaliana amin’ny zavatra rehetra. Tsy misy politika, tsy misy afa-tsy fiainana tsotra amin’ireto olona iharan-doza ireto. Izy ireo dia ny fanahin’i Rosia, tontolo mitovy ary tsy anjarany no misokatra amin’ny rehetra. Vakio sy ankafizo fa aza tratra. Ity novela ity dia tian’i Donald Trump… #Zo rehetra voatokana.